မြန်မာစစ်တပ်နှင့် စစ်ဖြစ်လာတော့မည့် အရေးအတွက် ပြင်ဆင်သည့် အနေဖြင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့သည် သူ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကို ပြင်ဆင် မွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်နေသည်။တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် သတင်းရပ်ကွက်များ အဆိုအရ KIO သည် သူ၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် - KIA ကို ပြန်လည်စုဖွဲ့မှုများ ပြုလုပ်နေပြီး တပ်သားသစ်များလည်း စုဆောင်းနေသည်ဟု သိရသည်။
ကေအိုင်အေ ကေဒါများ မိမိတို့၏ တောတွင်းစခန်းများသို့ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာသွားနေကြပြီး၊ မိမိတို့ ထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေတဝိုက်တွင် လုံခြုံရေးများ တိုးမြှင့် ချထားနေသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်းဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသည့် ကချင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ရက်အဖွဲ့ - KNDG ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ဝါက ပြောသည်။ကေအိုင်အေသည် ယင်း၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများကို ပြန်လည် ခေါ်ယူနေပြီး၊ တပ်သားသစ်များလည်း စုဆောင်းနေကာ သင်တန်းများ အပြင်းအထန် ပေးနေသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကတည်းက ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားသော တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် KIO သည် သူတို့၏တပ်ကို အသွင်ပြောင်းလဲရန် စစ်အစိုးရ၏ ဖိအားပေးခြင်းကို ခံနေရသည်။ကေအိုင်အိုအဖွဲ့အား နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းရေး နအဖဘက်က ကမ်းလှမ်းထားမှုအပေါ် ကေအိုင်အိုအဖွဲ့က ကချင်ဒေသလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကို မိမိစစ်သားများဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းလိုပြီး အနာဂတ် ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တွင် ကေအိုင်အိုက အာဏာရရှိရေး တောင်းဆိုခဲ့သည်။ထို့အပြင် ကေအိုင်အိုအဖွဲ့တွင် ကေအိုင်အေ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့်အဆင့်တူသည့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ စသည့်ဌာနများလည်း ရှိနေ၍ အသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် အဆိုပါဌာနများအတွက်လည်း ထည့်စဉ်စားရန်လိုကြောင်း ဇူလိုင်လ (၈) ရက်တွင် ကေအိုင်အိုဘက်က တင်ပြထားသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ အောင်ဇော်ထွန်း (၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈). "KIO ဥက္ကဋ္ဌသစ် တာဝန်အပ်နှံခြင်း အခမ်းအနား လိုင်ဇာတွင် ပြုလုပ်". ၇ ရက် နေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၆၇၆). Retrieved on ၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့&oldid=517995" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။